ပင်မစာမျက်နှာ တောင်အမေရိကဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ကိုလံဘီယာဘောလုံးကစားသမားများ Duvan Zapata ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
အစမှ စ၍ သူ၏အမည်ပြောင်မှာ“အဆိုပါ Panther Big“ မိဘများ၊ အစောပိုင်းဘဝနှင့်အခြားထူးခြားသည့်အဖြစ်အပျက်များအကြောင်းကလေးငယ်များပုံပြင်၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြပေးထားပါသည်။
Duvan Zapata ၏ဘဝနှင့်မြင့်တက်။ Image Credits: Semana နှင့် Goal တို့ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ Zapata ကသူ့ရဲ့အမြန်နှုန်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဂိုးများသွင်းယူခြင်းအတွက်သူရဲ့မျက်လုံးတွေကိုသိတယ်။ သို့သျောလညျးလူအမြားစုသညျကြှနျုပျတို့၏ Duvan Zapata ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ၏မူကွဲကိုအတော်အတန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်ဟုယူဆကြသည်။ နောက်ထပ် ado မပါဘဲ, ရဲ့စတင်ကြကုန်အံ့။
Duvan Zapata ကလေးဘဝပုံပြင် - အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုနောက်ခံ
စတင်ရန် Duván Esteban Zapata Banguero ၁၉၉၁ ခုနှစ်,ပြီ ၁ ရက်တွင်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ၊ ကာလီရှိရာဖေးလ်ဥရီးဘ်ယူရီဘီဆေးခန်းတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည်သူ၏မိခင် Late Elfa Cely Banguero နှင့်သူ၏ဖခင်လူးလူးအော်လီဗားဆာပါတာတို့မှမွေးဖွားခဲ့သောကလေးနှစ်ယောက်အနက်ဒုတိယဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Duvan Zapata ၏ချစ်စရာကောင်းသောမိဘများ၏ရှားပါးဓာတ်ပုံဖြစ်သည်။
Duvan Zapata ၏မိဘများနှင့်တွေ့ဆုံ - သူ့အမေ Late Elfa Cely Banguero နှင့်သူ၏ဖခင် Luis Oliver Zapata တို့နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ Image ကိုချေးငွေများ: Semana ။
Duvan Zapata ၏မိသားစုနောက်ခံ ဘောလုံးမှော်ဆရာသည်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးအာဖရိကန်အမေရိကန်မိသားစုမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်ကြောင်းသင်သိပါသလား။ တကယ်တော့ Duvan Zapata ရဲ့မိဘတွေကသူ့ကို Cali ရှိ Aguablanca ခရိုင်Córdobaရပ်ကွက်မှာသူ့အမေကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးသူအစ်မ Cindy Carolina နဲ့အတူကြီးပြင်းခဲ့တယ်။
ချစ်စရာကောင်းသော Duvan Zapata ကလေးဘဝဓာတ်ပုံ - သူသည် Cali ရှိ Cordoba တွင်ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ Image ကို Credit: Semana ။
Duvan Zapata ရဲ့ငယ်ဘဝ: ကာဒိုဘာတွင်ကြီးပြင်းလာသည့်လူငယ်ဒူဗန်သည်သူ၏အိမ်တည်ရှိရာကျဉ်းမြောင်းသော Cali လမ်းလျှောက်လမ်းပေါ်တွင်ဘောလုံးကစားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းကသူဟာကျော်ကြားတဲ့သို့မဟုတ်အံ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့မဟုတ်ဘဲ PlayStation ကိုတတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျော်ကြားတဲ့ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အိပ်မက်ခဲ့တယ်!
Duvan Zapata ကလေးဘဝပုံပြင် - ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် Buildup
ဒူဗန်အသက် ၁၁ နှစ်တွင်သူ၏ဘောလုံးစွမ်းရည်သည် Ciudad Córdobaရှိ Liceo Superior del Valle ၌သူ၏သမားရိုးကျကျောင်းပညာရေးသည်ဘောလုံးတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုတစ်ခုနှင့်အတူလက်တွဲသင့်ကြောင်းသင့်မိဘများသိသာထင်ရှားလာခဲ့သည်။
အသက် ၁၁ နှစ်တွင်ဒွမ်ဗန်သည်အားကစားကိုယ်ခန္ဓာရှိပြီးသားဖြစ်ပြီးဘောလုံးတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Image ကို Credit: Semana ။
ထို့ကြောင့်သူ၏မိဘများ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံပြီးနောက် ၆ တန်းကျောင်းသားဒူဗန်သည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်ဒေသဆိုင်ရာကလပ်အက်မရီကာဒီကာလီအသင်း၏ငယ်စဉ်ဘဝအဆင့်အတန်းကိုတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ဒေသခံကလပ်တွင်ဒူဗန်သည်သူ၌အစွမ်းအစ၊ သူသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်တွင် ၁.၈၆ မီတာမြင့်သည်။
Duvan Zapata ကလေးဘဝပုံပြင် - အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
အစောပိုင်းကသူ့ကိုကလပ်၏အကြီးတန်းကစားသမားနှင့်လေ့ကျင့်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသောသူသည်နည်းပြ Diego Diego Umaña၏နှစ်သက်မှုဖြင့်ဒူဗန်သည်အဆင့်အတန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်လာပြီးသူ၏ပွဲ ဦး ထွက်ပွဲစဉ်တွင်ပင်သွင်းယူနိုင်ခဲ့သည့်América de Cali တွင်ဖြစ်သည်။ ဒူဗန်သည်အာဂျင်တီးနားအသင်းသို့အငှားမ ၀ င်ခင်ရာသီအလိုက် ၂ ရာသီ (၂၀၀၉/၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁) တွင်အာမရီကာဒီကာလီအတွက်ကစားခဲ့သည်။
ရာထူးများမှတဆင့်တက်: သင်ကလပ်América de Cali အသင်းနှင့်အတူသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သလား? Image ကို Credit: Semana ။
အသင်း၏အရံအသင်းနှင့်ရံဖန်ရံခါပွဲထွက်ကစားခဲ့သည့်တိုင်ဘောလုံးတေးဂီတသည်ရည်မှန်းချက်များမြင့်တက်လာခြင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Estudiantes သည်သူ၏ကစားခွင့်အခွင့်အရေး၏ထက်ဝက်ကိုAmérica de Cali ထံမှဝယ်ယူခဲ့သည်။ သူသည်လက်မှတ်ထိုးရန်နီးကပ်နေသည့် West Ham အပါအ ၀ င်ထိပ်တန်းဥရောပဥရောပကလပ်အသင်းများမှအကျိုးစီးပွားများကိုမစတင်ခင်လေးတွင် ၀ ယ်ခဲ့သည်။ Duvan Zapata ရဲ့မိသားစု ၀ မ်းသာမှုဟာအီတလီကလပ်မှာအချိန်အကန့်အသတ်မရှိဆိုတာကိုမသိခဲ့ပါဘူး။ Napoli ကသူတို့အတွက်အီတလီဗီဇာရရှိရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။
Duvan Zapata အတ္ထုပ္ပတ္တိ- Fame ပုံပြင်မှလမ်း
နောက်ဆုံးတွင် Italian Side Napoli မှဝယ်ယူခဲ့သောဒူဗင်သည်ထိုအချိန်ကကလပ်၏စျေးအကြီးဆုံးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော်လည်းမိမိကိုယ်ကိုသက်သေပြရန်လျောက်ပတ်သောအခွင့်အရေးမရခဲ့ပေ။ တကယ်တော့နပိုလီယန်ရဲ့နည်းပြဖြစ်သူ Rafa ဘင်နီတက်ဇ် ဒွမ်ဗန်သည်ကလပ်အတွက်အရေးကြီးကြောင်းမကြာခဏမှတ်ချက်ချခဲ့သော်လည်းတိုက်စစ်မှူး၏ကစားကွင်းမှာမရှိခြင်းကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
နပိုလီယံသည်ထိပ်ဆုံးလေယာဉ်ဘောလုံးကစားခြင်းတွင်သူစိတ်ပျက်ခဲ့ရသည်။ Image Credit: ရည်မှန်းချက်။
ထို့ကြောင့်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ Naples Duvan အား Udinese သို့ငှားရမ်းခဲ့ပြီးဒဏ်ရာကြောင့်မတည်ငြိမ်သောပုံစံကိုခံစားခဲ့ရသည်။ Duvan ဟာသူရဲ့စွမ်းရည်ကိုအပြည့်အ ၀ မဖြည့်ဆည်းနိုင်သေးတဲ့ Sampdoria မှာငှားရမ်းခြင်းအပေါ်စွဲမှတ်မှုမရှိခဲ့ပါ။ တကယ်တော့ဒွမ်ဗန်သည် ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ကိုလံဘီယာအသင်း၏ပဏာမကစားသမားကိုခေါ်ယူခဲ့သော်လည်းသိသာထင်ရှားသည့်အကြောင်းပြချက်များကြောင့်နောက်ဆုံးစာရင်းတွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
Duvan Zapata အတ္ထုပ္ပတ္တိ- Fame ပုံပြင်မှထလော့
ပြာမှပေါ်ထွက်လာသော Phoenix ကဲ့သို့ Duvan သည်သူ၏အစွမ်းအစများကိုပြသခဲ့သည် အတ္တလန်တာသူဟာအီတလီကလပ်အသင်းကိုမလိုအပ်တော့ကြောင်းဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်မှာတော့ Sampdoria ကသူ့ကိုရောင်းလိုက်တာပါ။
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဂိုးများဖြင့်ဒူဗန်သည်သူနှင့်တွဲဖက်ပြီးစီးရီးအေ၏အကောင်းဆုံးဂိုးသွင်းသူဖြစ်သည် စီရော်နယ်ဒို မိမိအပွဲ ဦး ထွက်ရာသီအပေါ်! သူသည် Atalanta ကို 2019 Coppa Italia Final တွင်စီးရန်ကူညီခဲ့ပြီး Serie A. တွင်တတိယနေရာတွင်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျန်သူများမှာမူသမိုင်းဖြစ်သည်။
Christiano Ronaldo ကိုဘယ်သူဆုပေးခဲ့သလဲဆိုတာကြည့်ပါ။ Image Credit: Instagram ။
Duvan Zapata ဇနီးနှင့်ကလေးများ
Duvan Zapata ရဲ့မိသားစုဘ ၀ ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုရင်းသူရည်းစားဖြစ်သွားတဲ့သူ့ဇနီး Nana Montañoနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီးသူ့အိမ်ထောင်ရေးဘ ၀ မှာကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ Duvan သည်အာဂျင်တီးနားဘက် Estudiantes တွင်ကစားစဉ်ကစုံတွဲများသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် Cali ၌တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က Nana သည်ကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ချိန်းတွေ့ခဲ့ကြပြီးနောက်နှစ်အနည်းငယ်အကြာလက်ထပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုနောက်အဆင့်သို့တက်ခဲ့ကြသည်။
Duvan Zapata ၏ဇနီးနှင့်တွေ့ဆုံပါ။ သူတို့တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အပြည့်အဝကြည့်ရှုကြသည်မဟုတ်လော။ Image Credit: Instagram ။
Nana ဟာသူမယောက်ျားကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ သို့ဖြစ်သောကြောင့်ဒွမ်ဗန်သည်သူမနှင့်သူမဇနီးဖြစ်လာမယ့်အချိန်ကာလအတွင်းမှာအခြားမိန်းကလေးများနဲ့အတူအခြားမိန်းကလေးများရှိနေကြောင်းမှတ်တမ်းများမရှိပါ။ ဒီဇီဝရေးသားတဲ့အချိန်မှာစုံတွဲတွေကချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့မိဘတွေပါ။ ၎င်းတို့တွင် Dantzel (သမီး) နှင့် Dayton (သား) တို့ပါဝင်သည်။
Duvan Zapata ၏ဇနီး၊ ကလေးများ Dantzel & Dayton နှင့်အတူဓာတ်ပုံ။ Image Credit: Instagram ။
Duvan Zapata မိသားစုအချက်အလက်များနှင့်ဘဝ
မိသားစုမရှိဘဲ Duvan Zapata ဆိုတာဘယ်သူလဲ၊ သူ့မိဘနှင့်မောင်နှမများကသူ့အတွက်အစကတည်းကမရှိခဲ့လျှင်သူဘာဖြစ်လာမည်နည်း။ Duvan Zapata ရဲ့မိသားစု ၀ င်တွေအကြောင်းကိုသူ့မိဘတွေနဲ့စပြောပြပါမယ်။
Duvan Zapata ရဲ့ဖခင်အကြောင်း လူးဝစ်အိုလီဗာစပါတာသည်ဘောလုံးပါရမီ၏ဖခင်ဖြစ်သည်။ သူသည်ကိုလံဘီယာ၊ ကောရိန္သုတွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး Tetillo တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်။ Zapata ဟာချစ်ခင်ပြီးထောက်ခံအားပေးတဲ့ဖခင်တစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ Duvan ကိုနာခံမှုရှိတဲ့၊ လေးစားမှုရှိတဲ့ကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဘာလဲ လူးဝစ်ဟာဒွမ်ဗင်ကိုသူ့ရဲ့အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းတည်ဆောက်မှုမှာလေ့ကျင့်ပေးဖို့ဘယ်တော့မှမမေ့ခဲ့ဘူး။ လူးဝစ်သည်မိမိ၏တစ် ဦး တည်းသောသားကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်နှင့်နှိမ့်ချမှုရှိရန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။
လူးဝစ်၏ရှားရှားပါးပါးဓာတ်ပုံတစ်ပုံသည်စျေးကြီးသောအားလပ်ရက်အားဖြင့်သားဖြစ်သူ၏အောင်မြင်မှုများကိုရရှိခဲ့သည်။ Image ကို Credit: WTFoot ။
Duvan Zapata ၏မိခင်အကြောင်း: နှောင်းပိုင်းအဲလ်ဖာ Cely Banguero Duvan Zapata ၏အမေ။ သူမသည်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ၊ ပါဒေးလာတွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး Tetillo တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး Duvan ၏ဖခင်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူမ၏ခင်ပွန်းလူးကဲ့သို့ပင်အဲလ်ဖာသည်တစ် ဦး တည်းသောသားကိုပြုစုပျိုးထောင်ရာတွင်အရေးပါခဲ့သည်။ တကယ်တော့သူမသည်အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် Duvan ကိုဒေသခံကလပ်América de Cali ၏လူငယ်ဘဝအဆင့်သို့တက်ရန်ကြိုးစားခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဝမ်းနည်းစရာကသူမသည်သူမပြိုလဲသေဆုံးပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်ဇွန်လတွင်သေဆုံးခဲ့သည်နှင့်အမျှသူမ၏လုပ်အား၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုမခံစားနိုင်လောက်အောင်အသက်တာရှည်စွာမနေထိုင်ခဲ့ဖူးကြောင်း၊ Duvan ၏ခံစားချက်ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းခံစားခဲ့ရသော်လည်းသူသည်အချိန်တိုအတွင်းအတူတကွစုရုံးခဲ့ပြီးမိခင်၏မှတ်ဥာဏ်ကိုဂုဏ်ပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဘောလုံးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေခြင်း။
Duvan Zapata ၏အမေနှင့်တွေ့ဆုံပါ။ သူသည်အခြားသူနှင့်မတူပါ။ Elfa Cely Banguero ၏မှတ်ဉာဏ်သည်သူ၏သား Duvan ၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်ထာဝရတန်ဖိုးထားခံရလိမ့်မည်။ Image ကို Credit: Semana ။
Duvan Zapata ၏မောင်နှမများအကြောင်း: Duvan တွင်သူ့အစ်ကိုမောင်နှမဖြစ်သောညီမတစ်ယောက်မျှမရှိကြောင်းသင်သိပါသလား။ Cindy Carolina လို့အမည်ရတဲ့အမျိုးသမီးဟာ Duvan နဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ပြီးသူငယ်ငယ်ကတည်းကသူနဲ့အမြဲနီးစပ်ခဲ့တယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာသူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ဘောလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ တူညီသောစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးကွာသော်လည်းမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများကိုပွင့်လင်းစွာထားရှိရန်သတိပြုရန်မှာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။
Duvan Zapata ၏အစ်မ - စင်ဒီကာရိုလိုင်းနားနှင့်တွေ့ဆုံပါ။ နှစ် ဦး စလုံးအတူတကွကြီးပြင်းခဲ့ကြပြီးရင်းနှီးသောနှောင်ကြိုးကိုမျှဝေခဲ့ကြသည်။ Image ကို Credit: Semana ။
Duvan Zapata ၏ဆွေမျိုးများအကြောင်း: Duvan Zapata ၏ဘဝမှဝေးလံလှသောနေရာမှသူ၏မိခင်နှင့်အဖေဘက်ကအဘိုးအဘွားများနှင့်သက်ဆိုင်သောသူ၏မျိုးရိုးနှင့်မိသားစုအရင်းအမြစ်များကိုမသိရှိရသေးပါ။ Duvan Zapata ၏မိဘများကြောင့်သူသည်သူ၏ဝမ်းကွဲဖြစ်သော Cristian Zapata နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Cristian သည် Serie A ဘက်မှကစားသည်။ သူ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိများကိုရေးသားစဉ်ကသူ၏တူများ၊ တူမများနှင့် ၀ မ်းကွဲညီငယ်များကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်းသူ၏ ဦး လေးများ၊ အဒေါ်များအကြောင်းလူသိများသည်။
Duvan ၏ကျော်ကြားသောဝမ်းကွဲ Cristian Zapata နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ Image ကို Credit: Transfermarket ။
Duvan Zapata အတ္ထုပ္ပတ္တိ-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကအချက်အလက်
Duvan Zapata ၏ထူးခြားသောတိုက်စစ်မှူးတစ် ဦး အနေနှင့် Aries Zodiac ၏လက္ခဏာများအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောကြီးမားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူသည်စိတ်နှိမ့် ချ၍ လုံ့လရှိသူ၊ ပျော်ရွှင်မှုရှိသူ၊ ခံနိုင်ရည်ရှိသူ၊ ရည်မှန်းချက်ကြီးပြီးသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ရန်ပွင့်လင်းသည်။
တိုက်စစ်မှူးသည်ဘောလုံးကိုလေ့ကျင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ကစားခြင်းမပြုပါကအချိန်ပိုကိုသူ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်ဝါသနာများဟုမှတ်ယူထားသောလှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်ကိုပြုလုပ်သည်။ ၎င်းတို့တွင်ခရီးသွားခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ ဗွီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်သူ၏မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ဘယ်သူကပျော်စရာကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမကြိုက်ဘူးလဲ။ Image Credit: Instagram ။
Duvan Zapata အတ္ထုပ္ပတ္တိ- လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်အလက်
Duvan Zapata ၏ငွေနှင့်မည်သို့သုံးစွဲသည်နှင့် ပတ်သက်၍ သူရေးသားသည့်အချိန်တွင်သူသည်ခန့်မှန်းခြေအသားတင်ဒေါ်လာ ၁ သန်းရှိသည်။ တိုက်စစ်မှူး၏ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအများစုသည်ထိပ်တန်းဘောလုံးကစားခြင်းအတွက်သူရရှိသောလစာနှင့်လုပ်အားခများမှရရှိသောရင်းမြစ်များဖြစ်သည်။ ထောက်ခံချက်များကသူ၏တိုးပွားလာသောကြွယ်ဝမှုကိုများစွာအထောက်အကူပြုသည်။
ထို့ကြောင့်တိုက်စစ်မှူးကသူ့ကိုမနာလို ၀ န်တိုမှုများနှင့်ရန်သူများမှဇိမ်ကျကျနေထိုင်မှုပုံစံဖြင့်နေထိုင်ရန်ရရှိသည်။ Duvan ၏ကောင်းမွန်သောလူနေမှုအဆင့်အတန်းတွင်ဇိမ်ခံကားများမောင်းနှင်နိုင်ခြင်း၊ ဈေးကြီးသောအိမ်များနှင့်တိုက်ခန်းများတွင်နေထိုင်ခြင်းစသည်တို့ပါဝင်သည်။
အင်အားကြီးအမြန်နှုန်းပြကိရိယာကိုအနီးကပ်လေ့လာခြင်းသည်ဒွမ်ဗင်၏ Mini Cooper တွင်စီးနင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်လေးကသူနဲ့ selfie လိုချင်သည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ Image ကို Credit: WTFoot ။
Duvan Zapata အတ္ထုပ္ပတ္တိ- မရေမတွက်နိုင်သောအချက်အလက်များ
ငါတို့ Duvan Zapata ကလေးဘ ၀ ဇာတ်ကြောင်းနှင့်ပုံပြင်များကိုဤနေရာတွင်ခြုံငုံဖော်ပြရန်သည်တိုက်စစ်မှူးနှင့် ပတ်သက်၍ မသိသေးသော၊
Fact # 1: လစာပျက်ပြားခြင်း စာချုပ်သက်တမ်းအရအတ္တလန္တာဘီစီနှင့်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မည့်စာချုပ်အရပေါင်စတာလင် (၄.၆၈၀၀၀၀) ရရှိသည်။ တစ်နှစ်လျှင်။ Duvan Zapata ၏လစာကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းသောနံပါတ်များအဖြစ်သို့လျှော့ချလိုက်ခြင်းသည်အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
POUND Sterling အတွက်လစာ
တစ်နှစ်လျှင် $5,122,377 € 4,680,000 £ 3,970,867
တစ်လလျှင် $394,029 € 360,000 £ 305,405
တစ်ပတ်အတွင်း $98,490 € 90,000 £ 76,351
နေ့ရက်တစ်ရက် $14,069 € 12,857 £ 10,908
တစ်နာရီလျှင်နာရီ $586 € 536 £ 455
တစ်မိနစ် $9.76 € 8.9 £ 7.58
ဒုတိယ $0.16 € 0.15 £ 0.13
ဒီမှာကျွန်တော် Duvan Zapata ရဲ့လစာကိုစက္ကန့်တိုင်းတိုးတယ်။ သင်ဤစာမျက်နှာကိုကြည့်ရှုပြီးကတည်းကသူရရှိခဲ့သည့်အတိုင်းမည်မျှရရှိသည်။
အပေါ်ကနံပါတ်ကမတိုးဘူးဆိုရင်ဆိုလိုတာကသင်ကကြည့်နေတယ် AMP စာမျက်နှာ. ယခု ကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ Zapata ၏လစာငွေစက္ကန့်ကိုကြည့်ရှုရန်. မင်းသိလား?… ၎င်းသည် ၀ င်ငွေရရှိရန်အနည်းဆုံး ၈.၆ နှစ်ဥရောပ၌ပျမ်းမျှလုပ်သားလိုအပ်လိမ့်မည် အဆိုပါ Panther Big 1 လအတွက်ဝင်ငွေ။
အဖြစ်မှန် # ၂– ဘာသာတရား သတင်းများအရ Davan Zapata ၏မိဘများကသူ့ကိုကက်သလစ်ဘာသာရေးယုံကြည်မှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့သည်။ မင်းဟာဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူမဟုတ်ပေမယ့်တစ်ချိန်ကကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာတွေ့ခဲ့ဖူးသူ။ ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ဒွမ်ဗန်သည်ခရစ်ယာန်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်နှင့်ကက်သလစ်ဘာသာကိုကျင့်သုံးရန်ဖြစ်နိုင်ချေကိုယုံကြည်စေသည်။
Duvan Zapata ၏ဘာသာတရား - သူသည်ယုံကြည်သူဖြစ်ကြောင်းငြင်းဆိုခြင်းမရှိပါ။ Image Credit: Instagram ။
အချက် ၃။ Duvan Zapata Tattoo အချက်အလက် - ကဲ့သို့ Donyell Malen, ရှမွေလသည် Chukwueze, လူးဝစ်တကယ်တော့မူရီရယ် နှင့် Krzysztof Piatek, Duvan Zapata သည်စာရေးချိန်တွင်ကိုယ်ခန္ဓာအနုပညာမရှိပါ။ ပရိသတ်များအနေဖြင့်လည်းသူ့အားတက်တူးထိုးထားခြင်းမရှိသေးပါ။ သူသည်ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်မှု၊ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်လေကောင်းလေစွမ်းလေယာဉ်များအတွက်အမြင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်အာရုံစိုက်သည်။
ဓာတ်ပုံမှာသူရေးတဲ့အချိန်မှာတက်တူးမရှိဘူး။ Image ကို Credit: WTfoot ။
အဖြစ်မှန် # ၄: Duvan Zapata FIFA အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - Duvan Zapata သည် FIFA အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၈၃ ခုရှိကြောင်းသင်သိပါသလား။ သူ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်မကြာသေးမီကာလများကနက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရသော်လည်း ၈၇ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် FIFA ၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုဝါသနာရှင်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုငြင်းဆိုခြင်းမရှိပါ။
သူ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်တက်ပြီးလျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်။ Image Credit: SoFIFA ။
အဖြစ်မှန် # 5: Duvan Zapata အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ: အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အထူးသဖြင့်ခွေးများအတွက်ကစားသမားအများအပြားရှိပြီး Duvan Zapata သည်၎င်းတို့ထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ သူ၏ခွေးသည်မိသားစုဝင်များနှင့်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်ပြီးသူသည်မိသားစုဓါတ်ပုံများတွင်ပါ ၀ င်သည့်ပုံသဏ္evidentာန်၌ထင်ရှားသည်။
Duvan Zapata နဲ့သူ့မိသားစုလိုအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုသင်နှစ်သက်ပါသလား။ Image Credit: Instagram ။
Fact # 6: Duvan Zapata ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်သောက်ခြင်းအချက် - ဒွမ်ဗန်ဆာပါတာသည်အရက်ကိုအလွန်အကံျွသောက်ခြင်းအားမပေးခဲ့ပါ၊ စာရေးချိန်တွင်သူဆေးလိပ်မသောက်ခဲ့ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောကျန်းမာသန်စွမ်းသည့်အလေ့အထဖြင့်ဒွမ်ဗန်သည်ကျန်းမာနေရန်နှင့်နေရန်လိုအပ်ကြောင်းမျက်ခြည်မပြတ်သောဘောလုံးကစားသမားများအသင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။
Duvan Zapata အတ္ထုပ္ပတ္တိ- ဝီကီဗဟုသုတအခြေစိုက်စခန်း
Duvan Zapata အတ္ထုပတ္တိဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏ဤနောက်ဆုံးအပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝီကီဗဟုသုတအခြေခံကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ အောက်ဖော်ပြပါပြသမှုသည်တိုက်စစ်မှူးနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအတိုချုပ်နှင့်လွယ်ကူသောနည်းဖြင့်ရှာဖွေရန်ကူညီသည်။
Duvan Zapata ၏နာမည်အပြည့်အစုံ Duván Esteban Zapata Banguero
Duvan Zapata မွေးနေ့ ၁၉၉၁ Aprilပြီ ၁ ရက်
Duvan Zapata ရဲ့ခေတ် ၂၈ (ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ အထိ)
Duvan Zapata ၏ဖခင်၏အမည် Luis Oliver Zapata
Duvan Zapata ရဲ့အမေနာမည် အဲလ်ဖာ Cely Banguero (နှောင်းပိုင်း)
Duvan Zapata ရဲ့အမြင့် 1.89 မီတာ (6 ပေ2အတွင်း)
Duvan Zapata ၏မွေးရာပါနေရာ Padilla, Cauca, ကိုလံဘီယာ
Duvan Zapata ရဲ့အစ်မ စင်ဒီကာရိုလိုင်းနား
Duvan Zapata ရဲ့ဝမ်းကွဲ Cristian Zapata
Duvan Zapata ရဲ့ဘာသာတရား ခရစ်ယာန်ဘာသာ (ကက်သလစ်ဘာသာ)
Duvan Zapata ရဲ့ဇနီး Nana Montano
Duvan Zapata ရဲ့ကလေးများ Dantzel (သူ၏သမီး) နှင့် Dayton (သူ့သား) ။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ငါတို့ Duvan Zapata ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အကြောင်းမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများကိုဖတ်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ At LifeBogger, ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုအတွက်ကြိုးစားသည်။ မမှန်ကန်သောအရာတစ်ခုခုကိုသင်တွေ့ရှိပါကအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေပါ။ သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားလေးစားမည်။
Alfredo Morelos ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Davinson Sanchez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ကားလို့စ် Bacca ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Juan Cuadrado ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်